Makaanik jacaylka dhalinyarada ah ayaa ka shaqeeya gobolka Astrakhan - Magazine Nidaamka Baradhada
Bogga guriga Diirada
в Diirada, Sheekada Guusha, Injineerinka / Teknolojiyada
Beeraha casriga ahi maaha oo kaliya majarafad iyo daloolo, laakiin sidoo kale qalab cusub oo u baahan aqoon iyo xirfado gaar ah. Halka dhalinyarada maanta ay doortaan xirfado looga baahan yahay magaalooyinka waaweyn, shaqaale da'yar oo makaanik-cagaf Maxim Kirdyashev ayaa ka shaqeynayay Astrakhan Agrocomplex Enotaevka LLC in ka badan lix sano. Waxa uu ka helaa jacayl gaar ah xirfaddiisa. Tani waxaa soo wariyay wargeyska gobolka "Enotaevsky Vestnik" iyo bogga wararka ee Astrakhan.
Waxa uu doortay xirfadiisa si miyir leh. Ka dib markii uu ka qalin jabiyay sagaal fasal oo dugsiga sare ah ee tuulada Enotaevka Maxim galay laanta ee Astrakhan State University of Architecture iyo Civil Engineering sida makaanik auto.
"Waxaan ku dhashay tuulada, tan iyo caruurnimadii waxaan ku dhexjiray qalab: had iyo jeer waxaan ururin jiray, bedelay, wax hagaajin jiray," Maxim ayaa xusay.
Xeerarka aasaasiga ah ee uu ku dhaqmo shaqadiisa waa inuu ahaado mid feejigan oo masuul ah. Internetku waxa uu suurtogal ka dhigayaa in lagu hawl galo is-wax-barashada, si loo darso nuancesyada maaraynta tignoolajiyada cusub ee casriga ah. Maksim waxa uu sheegay in dad badan ay u arkaan shaqada dhulka in ay tahay mid adag oo mushaar yar. Laakiin, sida laga soo xigtay isaga, tani way ka fog tahay kiiska: shaqadu waa mid xiiso leh, bulsho ahaan muhiim ah, mushaharku waa mid sarreeya oo xasilloon.
"Shaqada waa adag tahay, laakiin aad u xiiso badan. Maantana in cagaf-cagaf la noqdo waxay la macno tahay hal-abuure, beeruhuna waa goob ay runtii aad ugu fiican tahay in laga shaqeeyo. Lixdii biloodba hal mar, kooxda oo dhan ayaa la siiyaa gunno, "ayuu yidhi shaqaale yar oo ka shaqeeya mashiinka.
Xilliga xagaaga, inta lagu jiro xilliga, nolosha darawalka cagaf-cagafku wuxuu noqdaa mid kacsan, iyada oo aan maalmo fasax ah iyo fasaxyo, laakiin markaa waxaa jira wakhti lagu nasto.
"Maanta, darawalada cagafyada oo wata qalab culus waxay dhiirigeliyaan ixtiraam. Laakin qof kastaa ma rabo in uu birta jeexjeexo oo uu hagaajiyo mishiinnada beeraha. Iyo rabitaan la'aan, waxba kama soo baxayaan. Shaqadan waa in la jeclaadaa. Hawlwadeenka mishiinku waa xirfad xiiso leh, xitaa waa hal abuur ilaa xad, sidoo kale waxaan ka helaa jacayl, "Maxim Kirdyashev ayaa xaqiijinaya.
Source: Astrakhan news portal
Laga soo bilaabo: Enotaevsky Rasuul
Tags: Gobolka Astrakhannolosha miyigamashiinka mashiinka
ShareShare46Share33Si aad u soo diri
Muddo toddobaad ah gobolka Ryazan, baradhada ayaa hoos u dhacay qiimaha
Roobab ay sababeen soosaarayaasha beeraha